Inona no vidiana any Egypt | Vaovao momba ny dia
Maria | | Africa, Ejipta
Izay mpandehandeha manana fanahin'ny mpikaroka dia mahalala fa toerana mahavariana i Egypty hiaina traikefa marobe mandona ny tantara manankarena sy lava. Eto amin'ity firenena tsara tarehy ity isika dia afaka mankafy ny taolam-biby taloha, ny piramida malaza, ny fasan'ny farao ary ny Neily, fantaro manokana izay rehetra novakiantsika tao anaty boky.
Amin'ny fitsidihana an'i Egypt dia azo antoka fa haka sary betsaka ianao hamenoana rakikira maromaro fa mety te hitondra karazana fahatsiarovana hafa momba azy io ary na fanomezana ho an'ny fianakaviana na namana aza. Ny tena zava-misy dia i Egypt dia firenena tena tsara miantsena, satria ny tanànany dia manana tsena lehibe izay amidy ny zavatra hitanao rehetra ary mazava ho azy fa ny vokatra mahazatra indrindra eto amin'ity tany ity. Inona no zavatra tsara indrindra azonao vidiana mandritra ny fialan-tsasatra any Egypte?
1 taratasy papyrus
3 Akanjo mandihy amin'ny kibo
6 ditin-kazo manitra
Papyri dia mora hita any amin'ny magazay amin'ny tanàna rehetra. Izy io dia fanohanana amin'ny fanoratana izay azon'ny Egyptianina taloha tamin'ny zavamaniry anaty rano antsoina hoe Cyperus papyrus.
Ny papyri tena izy dia tsy mora vidy ka tsy tokony hampijalina ianao dia tsy maintsy mijery azy manoloana ny jiro, satria raha misy teboka mainty dia azonao antoka fa tsy kopia izy io. Fetsy iray hafa ny mandena azy satria rehefa manao izany dia tsy tokony hisaraka ireo takelaka manamboatra azy.
Nampiasa papyri ny egyptiana hanoratana an-tsary hieroglyphs, sehatry ny andriamanitra ary hetsika misy ifandraisany amin'ny taranany.
Ilay fitoeran-by vy sy vera ampiasaina hifohana sigara misy tsiro samihafa sy sivanin'ny rano dia antsoina hoe shisha. Fahazarana efa raiki-tampisaka lalina any amin'ny firenena Silamo izany ka mora ny mahita azy ireo any amin'ny trano fisakafoanana sy fivarotana dite ary orinasa.
Samy hafa ny habeny sy ny endriny, ka raha mankany amin'ny fivarotana asa-tanana ianao hividy shisha, dia azo antoka fa ho hitanao hosodoko tanana miaraka amina endrika haingon-trano ejipsianina ireo. Iray amin'ireo toerana tsara indrindra hividianana azy ireo ny tsenan'i Khalili ao Kairo, izay ahitanao karazana isan-karazany amin'ny vidiny tena manintona.
Akanjo mandihy amin'ny kibo
Amin'ny fiaviany egyptiana, ity dihy ity dia miseho amin'ny alàlan'ny fivezivezena sasany ary mozika manokana. Ny akanjo handihizana amin'ity dihy ity dia natao tamin'ny lamba samy hafa loko sy fomba misy amboradara sy famaranana mamirapiratra. Matetika ny mpizahatany no mividy ireny akanjo ireny ho fahatsiarovana fa tsy natao hampiasaina any ivelany.
Ny amulets miendrika voangory dia iray amin'ireo fahatsiarovana hovidiana any Egypt. Nantsoin'ny Egyptianina taloha fa ny scarab dia Ra, mpamorona an'izao rehetra izao ary iray amin'ireo andriamanitra lehibe indrindra amin'ny fivavahana taloha. Izy ireo dia tonga amin'ny fitaovana, loko ary habe rehetra. Izy ireo koa dia malaza be amin'ny rojo sy haba.
Djellaba no akanjo ejiptiana mahazatra. Akanjo vita amin'ny akora samy hafa izay manarona ny vatana hatramin'ny hatoka ka hatramin'ny tongotra. Ny lehilahy dia fanao fotsy amin'ny fanao amin'ny antsipiriany mena amin'ny tendany, fa ny vehivavy kosa manana loko sy peta-kofehy maro isafidianana. Izy ireo dia hita ao amin'ireo fivarotana maro izay hita ao amin'ireo vohitra manodidina an'i Neily, ary koa amin'ireo fivarotana nentin-drazana any Kairo.
Ny firenena afrikanina dia manana fomban-drazana lehibe amin'ny famoronana menaka manitra ary io no iray amin'ireo vokatra be mpitady indrindra azo vidiana ao Egypt. Raha ny kalitao no tena fotony, ny indray mitete iray dia tokony ho ampy hanitra lava. Any amin'ny tanàn-dehibe toa an'i Alexandria na any Kairo dia misy arabe feno an'ireto karazana fivarotana ireto nefa tsy maintsy mitandrina ianao mividy ranomanitra any am-pivarotana misy antoka satria misy ny mifangaro ny rano amin'ny rano marobe ary mivarotra azy ireo toa ny menaka manitra tena izy.
Ny iray amin'ireo malaza indrindra dia ny Alamir Perfumes Palaces noho ny hanitra antsoina hoe Tsiambaratelo any an'efitra. Any akaikin'ny faritra Giza no misy azy ary manamarina azy ny governemanta Egyptianina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Africa » Ejipta » Inona no vidiana any Egypt